Robert Downey Jr. – Stars – Channel Myanmar
Iron Man (2008) MCU After being held captive in an Afghan cave, billionaire engineer Tony Stark createsaunique weaponized suit of armor to fight evil. 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။ MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ Download နိုင်ပါသည်။ ++++++++++++++++++++++++++++ Marvel Cinematic Universe Intro ======================= Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Universe မှာ Infinity ...
Kiss Kiss Bang Bang(2005) Kiss Kiss Bang Bang(2005) IMDb....7.6,,,Rotten...86% Kiss kiss bang bang ဟာ စုံ​ထောက်​ဟာသဇာတ်​မြူးကားဖြစ်​ပါတယ်​။ ဟယ်​ရီဆိုတဲ့ အ​ပေအ​တေ ဂျ​လေဘီတစ်​​ယောက်​က ရုတ်​တရက်​ ရုပ်​​ရှင်​သရုပ်​​ဆောင်​အ​နေနဲ့ အ​ရွေးခံရပြီး​တော့ အယ်​​အေကို​ရောက်​သွားပါတယ်​။ အဲ့ဒီမှာ ငယ်​ကကျွမ်းတဲ့ ငယ်​ကျွမ်း​ဆွေ​ကောင်​မ​လေး ဟာမီုနီနဲ့ ပါတီမှာပြန်​​တွေ့ခဲ့ရာက​နေ ငယ်​ငယ်​ကဇာတ်​လမ်းပြန်​စခဲ့ပါတယ်​။ ငယ်​ကျွမ်း​ဆွေ​ကောင်​မ​လေးမှာ ငယ်​ငယ်​ကအရမ်း admire ဖြစ်​ခဲ့ရတဲ့ စာ​ရေးဆရာ တစ်​​ယောက်​ရှိခဲ့ပါတယ်​။ အဲ့ဒီစာ​ရေးဆရာ​ရေးတဲ့စာအုပ်​ကို ပြန်​ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​တဲ့အခါမှာလည်း ရုပ်​ရှင်​မင်းသားကို အရမ်း​လေးစားခဲ့ပြန်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့လည်း သူမရဲ့ညီမ သူ့ကိုယ်​သူသတ်​​သေတာဟာ အဲ့ဒီရုပ်​ရှင်​မင်းသားနဲ့ ပတ်​သတ်​​နေပြန်​ပါ​ရော။ ဘယ်​လိုပတ်​သတ်​​နေတာလဲဆိုတာကို​တော့ ရှုစားကြည့်​ကြပါ။ ခုနက ဂျ​လေဘီ ဟယ်​ရီက​တော့ စုံ​ထောက်​​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေကို လိုက်​ပြီးကူလုပ်​​ပေးခဲ့ရပါတယ်​။ အဲ့ဒီက​နေ အရှုပ်​​တော်​ပုံတစ်​ခုထဲကို ​ရောက်​မှန်းမသိ​ရောက်​ခဲ့ရပါတယ်​။ သို့​သော်​လည်း ၎င်းအရှုပ်​​တော်​ပုံက သူရဲ့ ဟာမိုနီနဲ့ပတ်​သတ်​​နေတာဖြစ်​​လေ​တော့ သူဟာရုန်းထွက်​မရနိုင်​​အောင်​ဖြစ်​ခဲ့ရပါတယ်​။ ဟယ်​ရီတို့ ကိစ္စတစ်​ခုစုံစမ်း​နေချိန်​မှာပဲ ​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ အ​လောင်းကို တိုက်​တိုက်​ဆိုင်​ဆိုင်​​တွေ့ခဲ့ရပါတယ်​။ အသတ်​ခံရတဲ့​ကောင်​မ​လေးက​ကော ဟာမိုနီ့ညီမနဲ့ ဘယ်​လိုပတ်​သတ်​လဲ။ ဟိုရုပ်​ရှင်​မင်းသားက​ကော ဒီ​ကောင်​မ​လေးနှစ်​​ယောက်​​သေဆုံးမှုနဲ့ ဘယ်​လိုပတ်​သတ်​မလဲဆိုတာက​တော့ ဆက်​လက်​ရှုစားရင်းနဲ့ ရင်​ခုန်​လိုက်​ပါဦး။ ဇာတ်​လမ်းကို​တော့ ဟယ်​ရီ က​နောက်​ခံစကား​ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ...
Zodiac (2007) ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ၁၉၆၈ လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွဲလိုက်လူသတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဇိုဒီရက်ခ် ဆိုတဲ့ လူသတ်သမားအကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ဖြစ်ရပ်မှန် မှုခင်းကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခရိုနီကယ် သတင်းစာကို တစ်နေ့မှာ စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့တယ်.. ဒီစာထဲမှာ လူတစ်ယောက်က သူအရင်နှစ်တွေတုန်းက ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို လူတွေသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရေးထားတယ်… ဒီတော့သတင်းစာက လူတွေလည်းခေါင်းခြောက်ပြီး ရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ စာထဲမှာ ရေးသားထားတဲ့အမှုတွေဟာ အဲ့ဒီနေ့အထိ တရားခံမပေါ်သေးတဲ့ လူသတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်… အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ရဲတွေလည်းခြေရာခံရင်း သတင်းထောက်တွေကလည်းခြေရာခံရင်း လူသတ်သမားကလည်းလူတွေသတ်ရင်း တရားခံကို လက်ပူးလက်ကြပ်မဖမ်းနိုင်လောက်အောင် သက်သေတွေ သဲလွန်စတွေ အမှုကွင်းဆက်တွေ ပျောက်သွားရင်းနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော်ကြာတဲ့အထိ အမှုဟာ သို့လော သို့လောနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်.. ဒီဇာတ်ကားဟာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရိုက်ကူးထားတာပါ.. ပါဝင်တဲ့မင်းသားတွေ နာမည်ကြီးသလောက် ဇာတ်လမ်းဟာလည်း အစကနေအဆုံးတိုင်အောင် ကောင်းမွန် ရှည်လျားလှပါတယ်… ၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင် နည်းပညာတွေ သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးခင် အမေရိက ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဘယ်လိုအမှုလိုက်တယ်ဆိုတာကို ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ… Rating တွေကတော့ …IMDb- 7.7/10, Rotten tomatoes ...
The Judge (2014) ရင်ဘတ်ကြီးကိုဖွင့် နှလုံးသားကို စွင့်ပြီး ခံစားချင်သူတွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားဟာ အကောင်းဆုံးကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်. .ပြကွက်တစ်ကွက်ချင်းစီမှာ အရေးကြီးတဲ့ စနစ်တကျခြယ်သမှုတွေနဲ့ တင်ဆက်ထားပါတယ်.. ဇာတ်လမ်းကြာချိန်ကလည်း နှစ်နာရီ ခွဲလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာအရသာခံကြည့်ရှုရမယ့်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး ကြည့်ပြီးချိန်မှာ ရင်ဘတ်ထဲ ခံစားချက်တွေကျန်ခဲ့စေမယ့်အပြင် နောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ကောင်းလှပါတယ်.. kids တွေက ပါဝါရ်ိန်းဂျား..men တွေက DC တွေ Marvel တွေကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီကားက Legend တွေကြည့်တဲ့ကားလို့ သတ်မှတ်ပေးပါရစေ… Iron Man မင်းသား Robert Downey Jr က ဒီကားထဲမှာ ထက်မြက်တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ပါ.. သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျင့်က အပြစ်ရှိသူတွေဖက်ကပဲ ရှေ့နေလိုက်ပေးတာပါ.. သူ့မှာ ဇနီးနဲ့ သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်.. တစ်နေ့ တရားရုံးမှာ အမှုတစ်ခုရှေ့နေလိုက်နေရင်း သူ့အစ်ကိုအကြီးဆုံးဆီက သူ့အမေဆုံးပြီဆိုတဲ့ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်.. ဒါနဲ့သူ့အမေ အသုဘကိစ္စအတွက် သူ့ရဲ့နယ်မြို့လေးကို ပြန်ခဲ့သည်ပေ့ါ.. ညီအစ်ကိုသုံးယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာမှ အလတ်ကောင်ဖြစ်သူက တရားသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဖခင်နဲ့မတည့်လို့ အိမ်ကိုမပြန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပါပြီ. .ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေစလို့ အသုဘကိစ္စပြီးလို့ ပြန်မယ့်အချိန်ထိ အဖေနဲ့သား တကျက်ကျက်ပါပဲ.. ဒီလိုနဲ့အဖေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ လေယာဉ်ပေါ်အတက်.. အစ်ကိုအကြီးဆုံးဆီကဖုန်းဝင်လာပြန်တာက.. သူတို့အဖေတရားသူကြီး လူသတ်မှုနဲ့ ရဲစခန်းရောက်နေလို့ပါတဲ့… ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ...
IMDB: 7.4/10 154,000 votes
Chef (2014) အစားအ​သောက်​​ကောင်း​ကောင်း​လေး​တွေမှ သ​ဘောကျတယ်​ဆိုတဲ့လူမျိုး​တွေ ဒီဇာတ်​ကားကို လက်​မလွတ်​တမ်းကြည့်​သင့်​ပါတယ်​။ ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ စိတ်​ဝင်​စားဖို့​ကောင်းပြီး​ပျော်​စရာ​လေးနဲ့အဆုံးသတ်​ထားပါတယ်​။ စာဖိုမှူးတစ်​​ယောက်​ပီပီ ဘဝကိုအစားအ​သောက်​​တွေကိုပဲပုံအပ်​ခဲ့လို မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်​မ​ပြေဖြစ်​ရပါတယ်​။ အဲ့လိုချိန်​မှာပဲ အစားအ​သောက်​​ဝေဖန်​သူတစ်​​ယောက်​နဲ့ပြဿ နာတက်​ခဲ့ပြီး အလုပ်​ထုတ်​ခြင်းခံလိုက်​ရပါတယ်​။ အဲ့လိုအခက်​ခဲ​တွေက​နေ ဘယ်​လိုပြန်​ရုန်းထွက်​မလဲဆိုတာ သိချင်​ရင်​​တော့ ဒီဇာတ်​ကား​လေးကိုသာဆက်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ အစားအ​သောက်​​ကောင်း​ကွေကြိုက်​တဲ့သူ​တွေအတွက်​​တော့ လက်​မလွတ်​တမ်းကြည့်​သင့်​တဲ့ကားပါ File Size : (950 MB) and (370 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 54min Format : Mp4 Genre :Adventure, Comedy, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p BluRay x264-SPARKS Translated by Ye Yint Encoded by Thanhtike Zaw
IMDB: 7.3/10 158,231 votes
Tropic Thunder (2008) ဒီဇာတ်ကားက ပိုစတာကြည့်ပြီးခန့်မှန်းရရင် ရှယ်ကြမ်းမယ့် စစ်ကားလို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ရှယ်ကြမ်းတဲ့ ဟာသဇာတ်ကားပါ။ မင်းသားတွေက Iron Man မင်းသားကြီး Robert Downey Jr... Night at The Museum မင်းသားကြီး Ben Stiller... ဂါလီဗာ မင်းသားကြီး Jack Black... မင်းသားကြီး Tom Cruise...စတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေပါဝင်ထားပါတယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေ ရုပ်ဖျက် ပုံဖျက်ပြီး ပါဝင်ထားလို့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မမှတ်မိနိုင်တဲ့ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကြောင့် ရယ်ရမှာထက် ဇာတ်လမ်းနဲ့တင်ပဲ ဟားတိုက်ပြီးရယ်မိမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ။ အတော်ဂွကျလှတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး စဉ်းစဉ်းစားစားရိုက်ကူးတတ်တဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို အထူးချီးကျူးမိပါတယ်။ IMDb Rating -7 နဲ့ Rotten Tomatoes -82% ရရှိထားပြီး Comedy ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ထိပ်တန်းက အမြဲပါဝင်နေမယ့် ဇာတ်ကားပါ။ Comedy ဟာသကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ လုံးဝလက်မလွတ်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုပါရစေ။ File Size…(900 MB) and (400 MB) Quality…BluRay Rip ...
IMDB: 7.0/10 328,433 votes
Heart and Souls (1993) >>> Heart and Soul <<<< 1993 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Imdb 6.9 ရထား တဲ့ PG-13 Comedy Fantasy Romance ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးက နိုင်ငံတကာမှာပဲ ပေါက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သရဲလေးကောင် ဆိုတဲ့နာမည် နဲ့ ပုံစံတူရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးက 1959 ခုနှစ် မှာ လူလေးယောက်စီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ကားတစ်စီးနဲ့ ကိ်ုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တဦး စီးလာတဲ့ ကား တိုက်မိတဲ့ accident တခုအပေါ် သေဆုံးသွားတဲ့ဝိဉာဉ်၎ယောက်နဲ့ အသစ်မွေးဖွားလာတဲ့ခလေးကြား ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကံကြမ္မာ တခုက စတင်ပေးခဲ့တယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း >>>>>>ဆန်ဖရန်စစ်စကို : 1959 ခုနှစ် ပဲရ်နီဝါရှင်တန်အမည်ရှိ ဖုန်းအော်ပရေတာ တခုတွင် ညဆိုင်းလုပ်နေတဲ့ ခလေးသုံးယောက်အမေ single mon လူမည်းအမျိူးသမီး ။ ဂျူလီယာ အမည်ရှိ ချစ်သူ၏လက်ထပ်ခွင့်အား ငြင်းဆန်မိသဖြင့် နောင်တရနေတဲ့ စားပွဲထိုးမလေး ။ ...
IMDB: 6.9/10 13,837 votes
U.S. Marshals (1998) အဆိုးဆုံး ဝရမ်းပြေးတွေကို အကြမ်းဖက် လိုက်ဖမ်းပေးရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း US Marshals..... ကား မတော်တဆမှုကနေ တဆင့် တရားမဝင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ရှရင်ဒန် ၊ ရှရင်ဒန်ဟာ လူသတ်မှု နှစ်မှုအတွက် အလိုရှိနေတဲ့ အဆင်မြင့် အဖွဲ့အစည်းက ဝရမ်းပြေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ ရှရင်ဒန် ပတ်သက်နေတာ ဘယ်လိုအမှုမျိုးလဲ ။ တရုတ်လက်အောက်က ထိုင်ဝမ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်နေမှုမှာ အမေရီကန်က ကူညီမှု မှန်သမျှ သတင်းကို တရုတ်ကို ရောင်းစားတဲ့ သူလျှိုအမှုပေါ့ ။ အဲဒိအမှုမှာ ရှရင်ဒန်က အေးဂျင့် နှစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်မိတယ် ။ ရှရင်ဒန်ကို ကားမတော်တဆမှု ကနေတဆင့် မိသွားတော့ နယူးယောခ့်ကိုပို့တယ် ။ လမ်းမှာ သူ့ကို နှုတ်ပိတ်အစဖျောက်ချင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက သတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ရှရင်ဒန် လွတ်မြှောက်သွားတယ် ။ ရှရင်ဒန်ကို ပြန်ဖမ်းမိဖို့အတွက် US Marshals အဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးလိုက်တော့တယ် ...
IMDB: 6.5/10 81,613 votes